'जम्मू–कश्मीरलाई आतंकवादबाट मुक्त बनाउँछौँ' | Makalukhabar.com
देशले एक पारिवारिक रुपमा एक ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । एक यस्तो व्यवस्थाको हटाइएको छ, जसका कारण जम्मू–कश्मीर र लद्दाखका हाम्रा भाइ बहिनी अनेक अधिकारबाट बञ्चित थिए । उनको विकासमा बाधा थियो । हाम्रो विकासबाट टाढा थियो त्यो ।
जुन सपना सरदार पटेल, बाबा साहब आम्बेडकर, डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी र करोडौँ देशभक्तको थियो, त्यो अब पुरा भयो ।
जम्मू–कश्मीर र लद्दाखमा एक नयाँ युगको शुरुवात भएको छ । अब देशका नागरिकको हक र दायित्व पनि समान भएको छ । म जम्मू–कश्मीर र लद्दाखका सबै देशवासीहरुलाई मनैदेखि धरै बधाई दिन चाहन्छु ।
समाजमा कयौँ पटक यस्तो चीज हुन्छ, जसबाट मनमा स्थायी भाव प्राप्त हुन्छ । यस्तो लाग्छ कि केही परिवर्तन गर्न सकिँदैन । अनुच्छेद ३७० पनि यस्तै थियो । यसकारण जम्मू–कश्मीर र लद्दाखका हाम्रा भाइबहिनीको हानि भइरहेको थियो । उनीहरुको चर्चा नै हुँदैनथ्यो । अचम्मको कुरा त के छ भने तपाईँ जो कोहीसँग कुरा गर्नुहोस्, कसैले यो बताउनै सक्दैन थिए कि अनुच्छेद ३७० बाट जम्मू–कश्मीरका मानिसहरुको जीवनमा के लाभ भयो ।
परिवारवाद र व्यवस्थामा व्यापक भ्रष्टाचार बाहेक केही दिएन । यी दुवै अनुच्छेदको प्रयोग पाकिस्तानद्वारा देशविरुद्ध केही मानिसहरुको भावना भड्काउनका लागि हतियार बनाइरहेको थियो । यसैकारण पछिल्लो तीन दशकमा लगभग ४२ हजार निर्दोष मानिसहरु मारिए । यो आँकडा जो कोहीको पनि आँखामा आँशु ल्याउन सक्छ ।
जम्मू–कश्मीर र लद्दाखको विकास त्यो गतिबाट हुन पाएन जसको ऊ हकदार थियो । अब जम्मू–कश्मीर र लद्दाखका मानिसहरुको वर्तमान त सुर्धिन्छ नै उनीहरुको भविष्य पनि सुर्धिनेछ ।
कुनै पनि सरकार देशको भलाईकै लागि काम गर्छ, चाहे त्यो जुनसुकै दल या गठबन्धनको सरकार किन नहोस् । यस्ता कार्य निरन्तर चलिरहन्छ । कानून बनाउँदा संसदमा निकै बहस हुन्छ, संसदको बाहिर पनि निकै चर्चा हुन्छ । उक्त कानूनको आवश्यकता र प्रभावलाई लिएर गम्भीर पक्ष राखिन्छ । यस प्रक्रियाबाट गुज्रिएर जुन कानून तयार हुन्छ, त्यसले पुरै देशको भलाई गर्छ । तर कोही कल्पना गर्न सक्दैनन् कि संसद यति ठुलो संख्यामा कानून बनाउनुपर्छ र त्यो कानून एक देशको एक हिस्सामा लागु नहोस् ।
यहाँसम्म कि पहिलेको सरकार कुनै एक कानून बनाएर वाहवाही लुट्थ्यो, उनीहरु पनि यो दाबी गर्न सक्दैन थिए कि उनीहरुले बनाएको कानून जम्मू–कश्मीरमा पनि लागु हुन्छ । जुन कानून देशको नागरिकको लागि बन्ने गथ्र्यो, त्यसको लाभबाट जम्मू–कश्मीरका डेढ करोड ज्यादा मानिसहरु बञ्चित हुन्थे ।
सोच्नुहोस्, देशको अन्य राज्यमा बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकार छ तर जम्मू–कश्मीरका बालबालिका यसबाट बञ्चित थिए । के अपराध छ ती बच्चाहरुको ? देशका अन्य राज्यमा छोरीहरुलाई जुन हक मिल्थ्यो, त्यो हक जम्मू–कश्मीरका छोरीहरुलाई मिल्दैन थियो । देशका अन्य राज्यमा सफाई कर्मचारीका लागि सफाई कर्मचारी ऐन लागु भएको छ तर जम्मू–कश्मीरका सफाई कर्मचारी यसबाट बञ्चित थिए ।
देशको अन्य राज्यमा दलितमाथिको अत्याचार रोक्नका लागि कानून लागु गरिएको छ तर जम्मू कश्मीरमा यस्तो थिएन ।
नयाँ व्यवस्थामा केन्द्र सरकारको यो प्राथमिकता रहने छ कि राज्यका कर्मचारी, जसमा प्रहरी पनि सामेल छन्, दोस्रो केन्द्र शासित प्रदेशको कर्मचारी र त्यहाँका प्रहरीको बराबर सुविधा मिलोस् । अहिले केन्द्र शासित प्रदेशमा अनेक यस्ता वित्तिय सुविधाहरु दिइन्छ । यसमा अधिकांश जम्मू–कश्मीरका कर्मचारी र प्रहरी परिवारलाई मिलेको छैन । यस्तो सुविधा द्रुत गतिमा पुर्याइनेछ ।
छिट्टै नै जम्मू–कश्मीर र लद्दाखमा सबै केन्द्रीय राज्यका खाली पदमा परिपूर्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । यसले स्थानीय नवजवानलाई रोजगारीको पर्याप्त अवसर मिल्नेछ । साथै केन्द्र सरकारको सार्वजनिक सेक्टर यूनिट र प्राइभेट सेक्टरको कम्पनिको पनि रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन प्रोत्साहित गरिनेछ ।
सेना र अर्धसैनिक बलमा स्थानीय युवाहरुको भर्तिका लागि र्याली आयोजना गरिनेछ । सरकारद्वारा प्रधानमन्त्री छात्रवृत्ति योजनाको पनि विस्तार गरिनेछ ताकि धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीलाई यसको लाभ मिलोस् । जम्मू–कश्मीरमा राजस्व घाटा पनि धेरै छ । केन्द्र सरकार यो पनि सुनिश्चित गर्नेछ कि यसलाई कसरी समाधान गर्ने ।
केन्द्र सरकारले अनुच्छेद ३७० हटाउनुका साथै कालखण्डका लागि जम्मू–कश्मीरको सिधै केन्द्र सरकारको शासनमा राख्ने फैसला निकै सोचविचार गरेर लिइएको हो । यो बुझ्नु महत्वपूर्ण छ ।
जुन योजना पहिले कागजमा थियो, त्यसलाई जमिनमा उर्तार्ने कोशिस गरिएको छ । दशकौँदेखि अड्किएका प्रोजेक्टको नयाँ गति मिलिरहेको छ । हामीले जम्मू–कश्मीर प्रशासनमा नयाँ कार्य संस्कृति र पारदर्शिता ल्याउनका लागि सक्दो प्रयास गरिएको छ । जसको नतिजा आईआईटी, एम्स, आईआईएम, इरिगेशन र पावर प्रोजेक्ट या फेरि एन्टी करप्शन ब्यूरोका काममा तीव्रता आएको छ ।
यसबाहेक त्यहाँ ट्रान्सपोर्टसँग जोडिएको प्रोजेक्ट जस्तै सडक, ट्रेन र एयरपोर्टसँग जोडिएका काम पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
जम्मू–कश्मीरका भाइबहिनीलाई म अर्को कुरा पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु । तपाईँको जनप्रतिनिधि तपाईँहरुद्वारा तपाईँहरुको बीचबाटै चुनिने छ । जसरी पहिले एमएएल थिए, अहिले पनि हुनेछन् । जसरी पहिले क्याबिनेट थियो, अहिले पनि हुनेछ । पहिले सीएम थिए, अब पनि तपाईँको मुख्यमन्त्री हुनेछन् ।
मलाई पुरा विश्वास छ कि यो नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत हामी सबै मिलेर आतंकवाद र अलगाववादबाट जम्मू–कश्मीरलाई मुक्त बनाउने छौँ । जम्मू कश्मीरले विकासको नयाँ उचाई लिनेछ । पुरै विश्वको ध्यान आकर्षित गर्नेछ । नागरिकले आफ्नो हक विना रोकटोक प्राप्त गर्न सक्नेछन् । शासन प्रशासनको पुरै व्यवस्था जनहितका हिसाबले अघि बढाइनेछ ।
मलाई विश्वास छ कि ३७० हटाइए पश्चात् नयाँ व्यवस्थामा काम गर्ने मौका मिल्नेछ । मलाई पुरा विश्वास छ कि जम्मू कश्मीरका जनता अलगाववादको परास्त गर्दै नयाँ आशा, ऊर्जा र सपनाका साथ अघि बढ्नेछन् । मलाई यो पनि विश्वास छ कि जनता गुड गभर्नेन्स र पारदर्शिताको वातावरणमा नयाँ ऊर्जाका साथ लक्ष्य प्राप्ति गर्नेछन् ।
दशकौँको परिवारवादले जम्मू कश्मीरका युवालाई नेतृत्वको अवसर दिएन । अब युवा जम्मू कश्मीरको विकासको नेतृत्व गर्नेछन् र यसलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने छन् ।
केन्द्र शासित प्रदेश बनेपश्चात् अब लद्दाखका मानिसहरुको विकास भारत सरकारको स्वभाविक जिम्मेवारी हो । स्थानीय प्रतिनिधि र लद्दाख डेभलप्मेन्ट काउन्सिलको सहयोगबाट केन्द्र सरकार विकासका सम्पूर्ण योजनाका लाभ तेजले पुर्याउनेछ । लाद्दाखमा विना भेदभाव विकासका लागि नयाँ अवसर बन्नेछ । अब लद्दाखका नवजवानको इनोभेटिभ स्पीरिटको पनि मौका मिल्नेछ । राम्रो संस्थान मिल्नेछ । राम्रो अस्पताल मिल्नेछ । पूर्वाधारको आधुनिकिकरण हुनेछ ।
जम्मू कश्मीर र लद्दाखको हितका लागि हामी सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । म सबै देशवासीलाई यो पनि भन्न चाहन्छु कि जम्मू कश्मीर र लद्दाखको चिन्ता हामी सबैको चिन्ता हो । १०३ करोड नागरिकको चिन्ता हो । उनको सुख–दुःख र समस्यादेखि हामी अलग छैनौँ । अलग हुन पनि सक्दैनौँ ।
हामीले यो पनि भुल्नु हुँदैन कि आतंकवाद र अलगाववादलाई बढावा दिने पाकिस्तानको कोशिसको विरोधमा जम्मू कश्मीरका मानिसहरु डटेर उभिएका छन् । भारतको संविधानमा विश्वास राख्ने भाइबहिनी राम्रो जीवन जिउने अधिकारी हुन् । उनीहरुको सपना साकार पार्नका लागि उनीहरुलाई मौका मिलोस्, यो उनीहरुको हक हो । हामी ती सबैमा गर्व गर्छौँ ।
म जम्मू कश्मीरका साथीहरुलाई भरोसा दिलाउन चाहन्छु कि विस्तारै विस्तारै हालत सामान्य हुनेछ । र उनीहरुको समस्या पनि कम हुँदै जानेछ । जम्मू कश्मीर हाम्रो देशको मुकुट हो । यो हामी बाल्यकालदेखि नै सुन्दै आएका छौँ । र गर्व गर्छौँ यसमा । यसको रक्षाका लागि जम्मू कश्मीरका असंख्य छोराछोरीले बलिदान दिएका छन् ।
म जम्मू कश्मिरका भाइबहिनी, लद्दाखका भाइबहिनीसँग आह्वान गर्न चाहन्छु । आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर दुनियाँलाई देखाइदिऊँ कि क्षेत्रका मानिसहरुको सामथ्र्य कति धेरै छ । यहाँका मानिसहरुको हौसला, यहाँका मानिसहरुको जोस कति धेरै छ । हामी नयाँ भारतका साथ नयाँ जम्मू कश्मीर र नयाँ लद्दाख पनि निर्माण गर्नेछौँ ।
(भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अनुच्छेद ३७० खारेजपश्चात् देशवासीलाई गरेको सम्बोधन संक्षेप)
रारामार्टले ल्यायो अनलाईन हाटबजार, शुक्रबार ‘सपिङ्ग–डे’
पर्यटन वर्ष–२०२०ः व्यवसायिक पर्यटनको आवश्यकता
एलिना मगर देश संघीयतामा गएको धेरै समय भएको छैन । संघियतासँगै प्रायः प्रदेशहरुले समृद्धिको आधार पर्यटनलाई मानेका छन् । पर्यटनलाई मुख्य एजेण्डाको रुपमा उठान गरेको सुन्न पाइन्छ । यो शुभ संकेत हो । दिगो पर्यटन विकासको मुख्य तत्व व्यवसायिक पर्यटन अबको आवश्यकता हो । पर्यटन व्यवसायिकरणका लागि सरकारी तवरले... जारी राख्नुहोस...
हाम्रो राष्ट्रिय दिवस, न त फगत तामझाम हो, न आम जनतामा अरुची हुने निरङ्कुश शासकहरुको ‘उर्दी र तामेली’ जस्तो (प्रधानमन्त्रीको संवोधनको पूर्णपाठसहित)
लामो संघर्ष र बलिदानपछि पाँचबर्ष अघि आजकै दिन हामीले नेपालको संविधान जारी गरेका थियौं । जनताका आफ्नै प्रतिनिधिहरुद्वारा लेखिएको मुल कानुन– संविधान जारी गरी भएको यस ऐतिहासिक दिनको सन्दर्भमा सर्वप्रथम म, नेपाल सरकार तथा आफ्नो तर्फबाट यहाँहरु सवैमा पाँचौं संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसको हार्दिक वधाई... जारी राख्नुहोस...
कालो संविधानको विरोध गर्नुको विकल्प छैन हामीसँग
वि.सं. २०७२ को संविधानले शोषित, पीडित, उपेक्षित, मधेशी, आदीवाशी, जनताजति, महिला तथा पिछडिएका वर्गलाई समेट्न सकेको छैन । उनीहरुको पक्षमा छैन यो संविधान । संविधान जारी भइरहँदा २०६२–६३ को आन्दोलन ताका सात दलले गरेको प्रतिबद्धता र २०६३ को अन्तरिम संविधानको बर्खिलाप छ यो संविधान । त्यसको मर्म र भावना विप... जारी राख्नुहोस...
संविधान दिवस: करकाे हाेइन रहरकाे बनाेस्
उत्पादनका चारवटा आधारभुत तत्व भूमी, पूँजी, श्रम र संगठनमध्ये श्रम गतिशील र चलायमान हुन्छ । दोश्रो विश्वयुद्ध पछिका विकसित राष्ट्रलाई हेर्ने हो भने दक्ष एवं लगनशील श्रमको उपज नै त्यहाँको विकासको आधार बनेको देखिन्छ । लक्ष्यमा स्पष्ट र प्रशिक्षित राष्ट्रहरुले मात्रै होइन व्यक्तिहरुले समेत पूँजीलाई निर्... जारी राख्नुहोस...
समृद्ध नेपालका यी कर्णधारको अवस्था के होला ?
आज बिश्व बाल दिवस, सम्पुर्ण बिश्वभर रहेका सम्पुर्ण बालबालिकालाई उनीहरुको बिशेषतः आधारभुत आवश्यकता गाँस, बास, कपास सहित अधिकार मिलोस । शिक्षा, स्वास्थ्य सहितको बाल अधिकार सुरक्षित होस । सम्पुर्ण बालबालिकालाई बाल दिवसको हार्दिक हार्दिक शुभकामना । यति लेख्दै गर्दा केहि पुराना यादहरु मानसपटलमा घोत्लिन प... जारी राख्नुहोस...
अर्थमन्त्रीलाई विनोद चौधरीको प्रश्नः पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा समेत कर ?
नेपाल करको दृष्टिकोणबाट विश्वकै सबैभन्दा बढी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अंशको तुलनामा ३० प्रतिशत कर लाग्ने मुलुकका रुपमा चित्रण गरिएको मुलुक हो । ७५३ वटा बनेका सरकारहरु सबैलाई पैसा चाहिएको छ । अर्थमन्त्रीज्यूलाई त्यो पैसा पुर्याउनका लागि कर लगाउने नयाँ–नयाँ उपाय खोज्नुपर्ने बाध्यता मैले बुझेको छु । तर... जारी राख्नुहोस...